Xulalka Cameroon iyo Burkina Faso oo soo gudbay iyo Gabon oo ka hartay Koobka Afrika iyadoon marna laga badin
Friday, December 14th, 2018 - 01:20:47
Monday January 23, 2017 - 14:41:27 in Wararka by Muuse Cabdi
Xulalka Cameroon iyo Burkina Faso ayaa usoo gudbay wareegga 8-da xul ee koobka Qaramada Afrika markii ay natiijooyin wanaagsan ka heleen kulamadii ay ciyaareen.
Xulka Qaranka Cameroon ayaa garab dhac ka helay xulka Sanadkan Martida loo yahay ee Gabon kulankii caasimadda oo ku dhammaaday 0-0, halkaas Cameroon oo dhib u baahneyd waxay kusoo badxay 5 dhibcood iyo kaalinta labaad.
Gabon oo koobka marti gelineysa 2017 waxay ku hartay wareegga Guruubyada iyadoo la timid 3 dhibcood kulamadii 3da ahaa ee ay ciyaartay oo ay kulligood garab dhac gashay.
Burkina Faso ayaa guushii ay ka gaartay Guinea-Bissau oo 2-0 aheyd waxay uga filleyd in ay kusoo gudubto 5 dhibcood iyo kaalinta koobaad iyadoo la macno ah in ay 2 kulan garab dhacday marna adkaatay sida Cameroon oo kale.
Guruubka Labaad ee tartanka ayaa caawa la ciyaari doonaa ciyaarihiisa, waxaana foodda is daraya Senegal oo horay usoo gudubtay markii ay 2dii kulan ee furitaanka tartanka adkaatay iyo Algeria oo u baahan guul taasoo soo bixiddeedu xataa haddii ay badiso ay ku xirnaan doonto in laga badiyo kooxda Qaranka Tunisia.
Tunisia waxay la ciyaari doontaa Zimbabwe kulan ciyaareedka xiisaha badan kaasoo Tunisia ay kaliya ku filantahay in ay 1 dhibac hesho si ay ugu gudubto wareegga 8-da ee koobkan.